Muuse Biixi oo ka Hadlay Xidhiidh uu la yeeshay Cali Waran Cadde | Somaliland.Org
Muuse Biixi oo ka Hadlay Xidhiidh uu la yeeshay Cali Waran Cadde
August 29, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)-Guddoomiyaha Xisbiga tallada dalka haya ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa sheegay inuu doonayo dadka mudakarka ah ee dalka uu ku qanciyo barnaamijka Xisbiga KULMIYE.
Muuse Biixi waxa kale oo uu ka hadlay xidhiidh ay wada yeesheen Guddoomiyaha Siyaasada UDUB Cali Maxamed Waran Cadde oo uu xusay inuu kala hadlay sidii uu ugu soo biiri lahaa Xisbigiisa.
Guddoomiyaha KULMIYE oo la weydiiyay waxa ka jira inuu doonayo in Wasiirka daakhiliga loo Magacaabo Cali Waran Cadde, waxaanu yidhi “Magacaabidda waxa leh oo u war haya Madaxweynaha iyo xukuumadda, hawshaasina waxay u taalaa Madaxweynaha. Aniga Cali Waran Cadde saaxiib baanu nahay,waana nin aan qadariyo oo fiican haddii wararkaasi imika aad wadaan ee la leeyahay Muuse Biixi Warancadde xidhiidh bay yeesheen Waligayo waanu xidhiidhi jirnay waanan xidhiidhi doonaa. Way jirtaa inaanu mar wada sheekaysanay oo meel wada Joogsanay.”
“Intan aan KULMIYE Guddoomiyaha ka ahaa waxaan jecelahay oo aan Had iyo jeer raadiyaa dadka aan is leeyahay waa mudakar ee siyaasiyiinta ah ama Aqoonyahanka ah ee dalka jooga ee Cali Waran Cadde ka mid yahay waxaan doonayaa inaan ku qanciyo Barnaamijka Xisbiga KULMIYE oo aan Idhaahdo waar Iyadoo maalinba nin ,meel ka qayliyaa waxba tari maysee aan meel ka wada xadhig jiidno,”ayuu yidhi Md. Muuse Biixi.
Guddoomiyaha KULMIYE oo hadalkiisa sii watay waxa uu yidhi “Arrintani waa xil aan anigu isa saaray oo aan doonayo inaan ku soo ururiyo Dadka inta mudakar ah waanan sii wadayaa.”
Muuse Biixi waxa uu sheegay inuu awooda saarayo sidii uu waxgaradka bulshada ugu qancin lahaa Barnaamijka Xisbiga KULMIYE.
Muuse Biixi waxa uu ku dooday in Xidhiidh weyni ka dhaxeeyo Cali Waran Cadde. “Cali mudadii uu ka tirsanaa Dawladdii Rayaale sadex jeer ayuu isku dayay inuu igu qanciyo dawladii Rayaale, waa sidaas oo kale uun tan imikuna waxaanu nahay rag is yaqaana. Anigaana daba jooga isaga iyo rag badan oo kaleba,”ayuu yidhi Guddoomiyaha KULMIYE oo caawa u waramayay TV-ga Horn Cable.
Guddoomiyaha oo la weydiiyay saamaynta Xisbigiisa ay ku yeelanayso iscasilaadii Wasiirka Arrimaha Gudaha Dr. Gaboose waxaanu yidhi “Gaboose waa dhakhtar ah, siyaasi ah aqoon yahan ah oo karaamadiisa iyo qadarintiisa mudan, Xisbiga uu furto waanu soo dhawaynaynaa siyaasad taayada ka duwan inuu dalka keeno waanu soo dhawaynaynaa dalka ayay dan u tahay. Waan ku hambalyaynayaa.”
Previous PostMadaxweyne Siilaanyo oo shacbiga Somaliland Ku Hambalyeeyay Munaasibada Ciidul FudrigaNext PostGobolada Iyo degmooyinka Somaliland oo si weyn looga Ciiday Iyo Khubadii Madaxweyne Siilaanyo	Blog